KDE Plasma 5.15 waxay heshaa cusbooneysiintii ugu horreysay ee dayactirka | Laga soo bilaabo Linux
KDE Plasma 5.15 waxay heshaa cusbooneysiinkeedii ugu horreeyay ee dayactirka
Mashruuca KDE ayaa maanta bilaabay Cusboonaysiinta ugu horreysa ee dayactirka taxanaha ugu dambeeyay ee KDE Plasma 5.15 si loo xaliyo cilladaha iyo dhibaatooyinka kala duwan ee ay soo sheegaan dadka isticmaala.
KDE Plasma 5.15 waxaa la sii daayay usbuuc ka hor Febraayo 12 iyada oo leh astaamo iyo horumarin cusub, oo ay ku jiraan maamule xirmo la hagaajiyay, isdhexgal fiican oo leh tiknoolajiyada saddexaad iyo codsiyada sida Firefox, hagaajinta isdhexgalka, ikhtiyaarrada isku xirka cusub, iyo astaamaha dib loo habeeyay.
Cusboonaysiinta dayactirka, KDE Plasma 5.15.1, wuxuu u yimid inuu hagaajiyo khaladaad kala duwan oo khibradda ka dhigaya mid xasiloon oo lagu kalsoonaan karo. Qodobbada muhiimka ah waxaan leenahay dib u soo celinta kal-fadhiyada, hagaajinta menu-ka 'Kickoff' si aan ugu soo celino bogga Faalladaha, hagaajinta Discover iyo taageerada wanaagsan ee majaajillada.
KDE Plasma 5.15.2 Waxay imaaneysaa Febraayo 26
Waxyaabaha kale ee lagu cusbooneysiiyay KDE Plasma 5.15.1 waxaan ka xusi karnaa maareeyaha xirmada Plasma Discover, kordhinno kala duwan oo loogu talagalay Plasma sida Waqtiga iyo Comic, tuuryooyinka KDE, astaamaha cusub ee maareeyaha daaqada KWin, Maareeyaha awoodda Powerdevil, oo hadda lagu soo daray maareeyaha fadhiga, oo ay kamid yihiin qaybaha kale ee Plasma Workspace iyo Plasma Desktop.
Liiska buuxa ee isbeddelada waxaa laga heli karaa xidhiidhkan Dhamaan isticmaaleyaasha, KDE Plasma 5.15.1 waxaa laga heli doonaa kaydinta rasmiga ah ee qaybintaada Linux aad ugu dhakhsaha badan. Cusboonaysiinta labaad, KDE Plasma 5.15.2 ayaa imaaneysa isla usbuuca soo socda iyadoo xitaa la sii hagaajiyay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » KDE Plasma 5.15 waxay heshaa cusbooneysiinkeedii ugu horreeyay ee dayactirka
DigiKam 6.0.0 waa halkan oo kuwani waa warkiisa
Marti-geliyaha Fedora Atomic wuxuu hadda noqon doonaa Fedora Core OS